Akụkọ gam akporo: hapụ, akụkọ, asịrị na ndị ọzọ! | Gam akporo (Peeji nke 38)
Ule nke HTC Desire S (II)
Akụkụ nke abụọ nke nyocha nke HTC Desire S
Viver maka gam akporo. Ngwa maka Voip na izi ozi
Viber na-akwadebe ụdị beta maka gam akporo maka izu ole na ole sochirinụ. Ọ bụ ngwa na-enye ohere olu n’elu IP na ozi efu n’etiti ọnụ ndị nwere ngwa arụnyere.
Gtalk nwere vidiyo na ọdịyo maka gam akporo 2.3 nke XDA.
Guysmụ okorobịa si XDA jisiri ike ibudata ụdị Gtalk nwere ọdịyo na vidiyo iji mee ihe na gam akporo 2.3 (Gingergread)
Wuala maka gam akporo. Ike Virtual Drive na igwe ojii.
Ngwa Wuala maka gam akporo dị ugbu a. Jikwaa data gị na ntanetị site na iji kọmputa a.
Ahịa gam akporo karịrị App Store na ọnụ ọgụgụ nke ngwa n'efu
Ahịa gam akporo karịrị App Store na ọnụ ọgụgụ nke ngwa n'efu.
Ule nke HTC Desire S (I)
Ekele dịrị HTC, anyị enweela ohere ịnwale ụdị HTC, ndị HTC ...
Nyochaa nke HTC Incredible S. Anyị nwalere ya na mbụ.
HTC redirịba S ọnụ ule.
Mkparịta ụka Androidsis: @Anderwebs
Ajụjụ ọnụ Anderwebbs
AutoCAD maka gam akporo
Autodesk na-ewepụta ụdị mkpanaka nke Autocad maka gam akporo akpọrọ AutoCAD WS
Ndị hụrụ nkata, Ndị ọrụ Euroleague maka gam akporo na ahịa!
Turkish Airlines Euroleague nke bụ asọmpi egwuregwu bọọlụ basketball nke European. Na Ahịa gam akporo dị na ngwa ndị ọrụ Euroleague
Runtastic PRO 2.0, onye na-enye gị ọzụzụ na gam akporo gị.
Runtastic Pro 2.0 maka gam akporo. Onye ọzụzụ onwe onye na ọnọdụ GPS, ndekọ nke nnọkọ na ọdịiche dị elu, map ụzọ, ọganihu
Sony chọrọ inwe egwuregwu pụrụ iche maka Xperia Play
Sony mere ka ọha na eze nwee mmasị maka ndị mmepe egwuregwu vidiyo iji mepụta egwuregwu pụrụ iche maka ama ama nke Xperia ZXNUMX.
Ajụjụ ọnụ Androidsis: @RubenGM
Anyị ekwuola okwu na programmer @RubenGM ma anyị jụrụ ya ụfọdụ ajụjụ gbasara gam akporo ụwa na mmemme ...
Windows Live Messenger maka gam akporo dị njikere ugbu a
Ngwa Miyowa mepụtara ngwa Windows Live Messenger maka gam akporo ma ọ ga-adị maka nbudata na Market Gam akporo.
Ntuziaka njem Mtrip na arụmọrụ na-adịghị n'ịntanetị.
Ntuziaka njem Mtrip maka Anodrid na arụmọrụ na-anọghị n'ịntanetị, ịchọghị njikọ 3G iji jiri ha.
Mbadamba mbadamba Acer, Iconia A500 Tab, abụrụla ọnụahịa na Best Buy
Site n'ụtụtụ Fraịdee Eprel 9, Mbadamba Acer Iconia A500 dị ugbu a BestBuy.com maka ndoputa, maka ego nke 450 dollar. Na gam akporo 3.0
Pandora Radio na-eziga data nkeonwe onye ọrụ na sava mgbasa ozi
Pandora Radio maka gam akporo na-eme Ngwuputa Data nke data nke onye ọrụ, dika okike, ụbọchị ọmụmụ, ma ziga ha na sava mgbasa ozi
Hacked gam akporo ngwa malware na-arara gị nye nnukwu SMS !!
Na-eje ije & Text maka gam akporo na Malware. Ọ nwere ike ime ka ị bụrụ ezigbo "agbajikwa" na akwụkwọ ọnụahịa ọzọ nke onye ọrụ gị dabere na nzipu ozi SMS.!
N'ihi na ọ bụghị ihe niile bụ Google na Free Software maka Smartphones.
Edemede banyere free software gbara gburugburu smartphones.
Gam akporo ga - achịkwa OS ahịa maka smartphones na 2015 kwa!
Dika nyocha akwukwo banyere IDC na ndumodu, Android gha abu onye ndu uwa. Nke abụọ agaghị abụ RIM OS Blackberry, ma ọ bụ Apple iOS nke iPhone, mana Windows Phone
Ngwaọrụ. Wijetị na achọ na n'efu.
Wijetị, Wijetị na-achọ gị gam akporo
Snapkeys kiiboodu na enweghi igodo. Nke a ọ ga-abụ keyboard nke ọdịnihu?
Snapkeys a keyboard echiche na-enweghị egosi igodo bụ ike nke na-ekwe ka anyị dee n'etiti 60 na 160 okwu kwa nkeji.
Asịrị: Sony nwere ike iji Google Chrome OS malite netbook Vaio
Sonylọ ọrụ Sony ga-emepụta laptọọpụ Sony Vaio Vaio na Google Chrome OS na NVIDIA Tegra 2 processor.
Onye ntụgharị okwu. Jiri igwefoto gị na gam akporo gị tụgharịa asụsụ.
Camtranslator ihe osise eserese na android gị
CyanogenMod RC2 na gam akporo 2.3.3 maka Xperia X8
Sony Ericsson Xperia X8 nwere Gingerbread ekele maka XDA
Ndụmọdụ 13 na Atọ maka Ndụ Ndụ Batrị toro toro.
Ndụmọdụ 13 ma ọ bụ aghụghọ iji nweta ndụ batrị dị ogologo karịa na ama gị
Asphalt 5 HD na Nova HD Free na Ngwa Samsung
Free Asphalt 5 na Nova na Samsung App
Gam akporo 2.4: mmelite Gingerbread ma ọ bụ Ice Cream?
A na-anụ ọkwa gam akporo 2.4 ka ọ pụọ na Eprel, mgbe ekwuputara na ọ ga-apụ n'oge ọkọchị ma nwee Mmetụta Gingerbread.
Xtreamer PVR, Multimedia Center na gam akporo.
Xtreamer PVR Multimedia center na android, ewetara na Cebit na n'ọdịnihu n 'ụlọ anyị.
Leds Hack, gbanyụọ ọkụ na gam akporo gị
Nyochaa nke usoro ihe omume nke gam akporo Leds Hack
Mmetụta mmetụta na CyanogenMod ROMs
Mmetụta rụpụtara na Cyanogen roms
Nintendo DS emulator maka gam akporo (Na beta phase)
Nintendo DS emulator maka gam akporo, na beta ule.
Usoro maka gam akporo mbipute 2: Anyị nwalere RC1!
Usoro mmemme telivishọn, anime, ihe nkiri na-amasị gị? Cannot gaghị agbaghara ngwa "Usoro maka gam akporo". Ọbịbịa ọbịbịa nke ụdị 2.0 ya
CloudList, ndeputa ahia gi na igwe oji.
Cludlist, gị ịzụ ahịa ụgbọ na-bulite ígwé ojii, Ngwa ime ka zụọ enweghị ahapụ ihe ọ bụla na mgbe niile emelitere.
Tattoo HTC. Onye echefuru echefu.
Akụkọ banyere HTC na Tattoo na otu esi melite gam akporo 2.1 ma ọ bụ gam akporo ọ bụla anaghị abịa
10 Mere na-ahọrọ ihe gam akporo:
Ihe onye zụrụ ekwentị mkpanaaka ọhụụ ga-ajụ bụ: Kedu sistemu arụmọrụ m chọrọ na ekwentị m? 10 Mere na-ahọrọ ihe gam akporo mobile
Ha jikwaa ijikọ Microsoft Kinect na ngwaọrụ gam akporo
Ha jikwaa ijikọ Microsoft Kinect na ngwaọrụ gam akporo.
Mata, Nje Virus ọhụrụ (Trojan) na gam akporo!
Achọpụtara New Trojan virus na android, a na-akpọ HongTouTou. Onye ụlọ ọrụ nche LookOut kwuru nke na - ere antivirus maka sistemụ ekwentị. Mee ọchụchọ na pịa na nsonaazụ, ị nwere ike ịmegharị SMS.
Valve na-eweputa ego karịa onye ọrụ ọ bụla karịa Google na Apple
Ajụjụ ọnụ nke Gabe Newel, CEO nke Valve
Plex maka gam akporo !! Ọ bụ oge !!
Ewebata Plex maka gam akporo.
New Motorola Droid X2 (atụmatụ)
Akụkụ nke Motorola Droix X 2 ọhụrụ, ya na igwe nwere ihe abụọ 2Gh Tegra 1 processor. 4,3 "ihuenyo, igwefoto megapixel 8, mmepụta HDMI, vidiyo HD. A ga-ewepụta ya na nkeji nke abụọ nke 2011, ma eleghị anya ọ ga-abịa na gam akporo 2.3 Gingerbread.
Motorola na-enye Motorola PRO ya
Motorola gosipụtara ụnyaahụ February 14 na Barcelona MWC gosipụtara ụkpụrụ ya na keyboard nkịtị Motorola PRO maka ...
NOKIA kwusara agha na ANDROID
Nokia bụ onye chụpụrụ na 1 nọmba ụwa site na gam akporo. Ọ mara ọkwa na MWC 2011 na ya na Microsoft jikọtara ya na ya, yana Windows Phone 7 Sistemụ arụmọrụ, na-alụ ọgụ Google's OS. Ọ bụrụ na Nokia adịworị njọ, ugbu a ọ ga-aka njọ.
Sony-Ericsson na MWC
Akụkọ Sony-Ericsson na World Mobile Conference na Barcelona 2011
Umeox Apollo, nke mbụ gam akporo ama na-arụ ọrụ na ike anyanwụ
Umeox Mobile ka gosipụtara mbụ gam akporo ekwentị nke na-arụ ọrụ na ike anyanwụ na MWC
Were keyboard maka Galaxy Tab n'efu
Nkwalite Samung na-ewepu keyboard Tab Tab.
Htc mmekọrịta na-emelitere na bụ ugbu a dakọtara na niile Htc gam akporo smartphones
Htc mmekọrịta natara mmelite na ugbu a dakọtara na niile na-emeputa si android ụdị
Google zara banyere gam akporo njehie na-ezipụ SMS
Google weputara nkwupụta nke o mesiri obi ike na nsogbu ahụ na izipu SMS achọpụtalarị na ha na-arụ ọrụ iji dozie ya site na mmelite nke ngwa SMS.
Anyị enweela gam akporo na Nokia, Gingerbread na-arụ ọrụ na Nokia N900
A gam akporo bịarutere Nokia n’enweghị ọkwa, anyị nwere ike ịhụ ụdị ọhụụ nke mgbanaka mgbanaka na-arụ ọrụ na Nokia N900
Anyị nwalere mbadamba gam akporo Archos 101 ma anyị chere banyere ya
Anyị na-anwale Archos 101 Android tablet maka ụbọchị ole na ole ma anyị hapụrụ gị echiche anyị banyere ya
Wụnye Gingerbread Live na akwụkwọ ahụ aja na Nexus One gị
Wụnye ọhụrụ Gingerbread animated na akwụkwọ ahụ aja na gị Nexus One, naanị ma ọ bụrụ na ị na-esite
Gam akporo na-aga n'ihu inweta ala site na IOS ebighi ebi
Gam akporo na-aga n’ihu na-enweta ọnụego ndị ọrụ na ala site na onye iro Apple nke IOS.
Anyị nwalere Htc Desire HD ma anyị ga-agwa gị ihe anyị chere
Abọchị ole na ole anyị nwalere Htc Desire HD ma anyị kọọrọ gị ihe anyị chere banyere nke ọhụrụ gam akporo ama na Froyo
AppsBuilder.com, mepụta ngwa gam akporo gị n'ịntanetị
Na appsbuilder anyị nwere ike ịmepụta ngwa gam akporo anyị na-enweghị ihe ọmụma mmemme yana na usoro dị mfe.
Samsung Galaxy Tab, anyị nwalere ya ma nye echiche anyị
Mgbe ịlele Samsung Galaxy Tab maka ụbọchị ole na ole, anyị ga-ahapụrụ gị mmetụta anyị
Buru onye mbu kwalite na Gingerbread, kwadebe Nexus One gi
Kwadebe Nexus Otu ka ọ bụrụ onye izizi ịnata mmelite Gingerbread
Kwadebe Nexus Ones gị maka mmelite Gingerbread
Site na OHA na-abịa nkwupụta dị nro sitere n'aka otu n'ime ndị otu ya, kwadebe Nexus One maka mmelite ya na Gingerbread
Ihe nzuzo SMS Replicator, ngwa ewepụrụ na Market gam akporo
Na gam akporo Market enwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa bara uru ma maka ntụrụndụ ma ọ bụ ọrụ na ...
Otu ahụhụ na nnụnnụ ndị iwe na-enye gị ohere ịmeghe ọkwa
A ahụhụ na-chọpụtara na egwuregwu nnụnụ na-enye gị ohere unlock kpọghee ekwt niile etoju nke egwuregwu
Ma gam akporo 2.5, ma obu 3.0, Gingerbread abughi gam akporo 2.3
Versiondị gam akporo a maara dị ka Gingerbread ga-abụ gam akporo 2.3
Gam akporo 3.0, ụgbụgbọ mmanụ a ,ụ, T2, Samsung, ụbọchị, ihe ọ bụla a nụrụ asịrị ruo ugbu a ị nwere ya ebe a
Ka ọ dị ugbu a, enwere ọtụtụ asịrị banyere Gingerbread, Samsung, njedebe ha, mbata mbadamba na gam akporo 3.0, ụbọchị, ihe niile a chịkọtara ebe a.
Jiri gam akporo gi kpoo Tetris
Ihe ncheta ole ka mu na Tetris! Echere m na ọ bụrụ na ị bụ afọ 30 gbagoro….
Steve Jobs na-awakpo onye ọ bụla na-amalite site na gam akporo, ọ ga-abụ akwara?
Apple gosipụtara nsonaazụ Mọnde gara aga wee jiri ohere ahụ Steve Jobs wakporo onye ọ bụla, bido na gam akporo
Official Android 2.2 Rom maka Htc Ime Anwansi / MyTouch 3G dị
Ngwaọrụ gam akporo 2.2 dị maka Vodafone Htc Magic
Acer Aspire Obi ,tọ, netbook na gam akporo 2.1 na Windows 7
Acer ekwuputala ọbịbịa nke Acer Aspire Obi ,tọ, akwụkwọ ntanetị abụọ nwere gam akporo 2.1 na Windows 7 sistemụ arụmọrụ.
A na-emelite Market gam akporo maka nsụgharị nke gam akporo 2.1
Google amalitela imelite ngwa ahia gam akporo maka nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ 2.1
Htc Desire HD na Vodafone Spain si € 0 na Htc Desire Z naanị maka ụlọ ọrụ na freelancers
Vodafone gosipụtara na Spain ọnụahịa maka Htc Desire HD na Htc Desire Z
Ebee ka aha gam akporo na logo si?
A gam akporo abughi aha otutu mmadu mara, imara ebe o si bia?
Qualcomm weputara ya Augmented Reality SDK maka gam akporo tinyere mpi
Qualcomm amalitela SDK maka eziokwu dịwanye elu na gam akporo yana yana asọmpi ya na $ 200.000 na onyinye
Usoro Ọkachamara Ọkachamara na Ngwa na Ọrụ na Ngwaọrụ Ekwentị
Usoro Ọkachamara Ọkachamara na Ngwa na Ọrụ na Ngwaọrụ Mobile nke UNED haziri
CyanogenMod 6 anụ siri ike na gam akporo 2.2 dị ugbu a maka ọnụ dị iche iche
CyanogenMod 6.0 na ụdị anụ ya adịlarị maka ụfọdụ ngwaọrụ dịka Nexus One, Htc Magic ma ọ bụ Htc G1
Dell Aero gam akporo ọnụ dị maka ịzụta
Dell Aero ọnụ dị ugbu a maka ịzụta site n'aka ndị ọrụ AT&T na United States
Polaroid PoGo 3 × 4, bipụta foto ozugbo na gam akporo gị
Na Polaroid 3x4 na ngwa gam akporo ya, anyị nwere ike izipu ma bipụta onyonyo ozugbo site na ekwentị gaa na ngwa nbipute.
Kaspersky hụrụ Trojan na gam akporo ma kpọsaa ụlọ antivirus ya, ihe ndabara?
Companylọ ọrụ ahụ mepụtara antivirus, Kaspersky ekwuputala na e nwere Trojan na nyiwe gam akporo yana n'ụzọ na-ekwuwapụta ụlọ antivirus ya, dabara na ya.
Nexus Otu dị maka ndị mmepe dị ka ADP3
Nexus One dị maka ndị mmepe maka zụta site na akaụntụ onye nrụpụta ha
Na ngwa Viper anyị nwere ike iji ụgbọ ala anyị na-emekọrịta ihe
Viper bụ ngwa nke anyị nwere ike iji rụọ ọrụ anyị n'ụgbọala anyị site na njedebe gam akporo.
All na akwụkwọ ahụ aja maka gị gam akporo na otu weebụsaịtị
Emeela weebụsaịtị ebe ebe akwụkwọ ahụaja niile maka njedebe gam akporo nwere ike ịchọta, yana ohere ibudata ha.
Ihe ịma aka ọhụụ maka gam akporo, dozie 7x7x7 Rubik's Cube
Ihe ịma aka ọhụrụ maka gam akporo, na-edozi cube 7x7x7 Rubik, ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji dozie ya?
Full Android na ụgbọ ala gị
Site na ntaneti TV nke Droid Incredible nwere, enwere ike ijikọta ya na dashboard nke ụgbọ ala ma nwee ike iji gam akporo zuru ezu na ya.
Viafirma na-enyere anyị aka iji asambodo dijitalụ na gam akporo
Viafirma bụ ikpo okwu nke na-enyere anyị aka iji asambodo dijitalụ na gam akporo.
Ngwa Inventor, mepụta ngwa gam akporo nke gị n’amaghị etu esi eme mmemme
Google ka ulo oru Inventor App maka gam akporo nke anyi nwere ike iji meputa ngwa nke anyi n’enweghi echiche obula.
Wụnye Android 2.2 na Htc Ime Anwansi ma ọ bụ Htc G1 / Nrọ
Cyanogen Mod ka tọhapụrụ ya gam akporo 2.2 mbipute maka Htc Ime Anwansi na Htc G1 / Nrọ ngwaọrụ
A gam akporo 2.1 melite maka Acer Liquid ugbu a na Spain
Nwelite gam akporo 2.1 maka Acer Liquid di ugbu a
Sony Ericsson Media Go, mekọrịta Xperia gị na PC gị
Sony Ericsson Media Go bụ ụlọ zuru ezu nke na-enye anyị ohere ịmekọrịta ọnụ anyị na Xperia, ma Xperia X10 ma ọ bụ Xperia Mini na PC anyị.
Gịnị bụ koodu QR?
Nkọwa nke koodu QR bụ, ihe ha bụ maka otu anyị nwere ike isi kee ha.
Nweta Samsung Galaxy S na ọkara ọnụ
N'ikwekọ na mwepụta nke Samsung Galaxy S na Spain, ọnụ a ga-adị na ọkara ọnụego mbụ.
Debe Super Mario Bross dị ka akwụkwọ ahụaja animated na gam akporo gị
Site na XDA ka akwụkwọ ahụaja eserese nke Mario Bross na-abịa, plọmba ndị ama ama na mbara igwe.
Wụnye Samsung Galaxy S animated nzụlite na gam akporo gị
O kwere omume ugbu a ị wụnye ụdị animation nke Samsung Galaxy S na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwanrọ gam akporo ọ bụla
Nzukọ Android, taa Anderwebs
Taa, anyị na ndị Anderwebs, ndị maara ADW.Luncher onye nrụpụta ama nwere nzukọ ndị gam akporo
Imelite gam akporo 2.1 maka Orange's Htc Hero, ụzọ maka France
Site na France na-abịa n'ụzọ nke ụbọchị a ga-atụ anya nke mmelite na gam akporo 2.1 mana maka Htc Hero ọnụ nke ụlọ ọrụ nkwukọrịta dị iche iche
Samsung Galaxy S na Movistar site na July si € 0
Samsung Galaxy S ga - enweta ya na Movistar site na ọnwa Julaị na - abịa.
HTCManía Launcher, ngwa Android maka htcmaniacs
Htcmanía Launcher bụ ngwa nke ga-enye anyị ohere ịbanye na Portal ọkachamara na Htc ọnụ site na desktọọpụ gam akporo anyị.
ADW. Launcher, gbanwee ihu nke desktọọpụ gị
ADW.Luncher bụ ngwa anyị nwere ike iji gbanwee ihu nke ngwa ngwa anyị na mgbakwunye na ịnye ya arụmọrụ karịa.
T-Mobile kwadoro mmelite ahụ na gam akporo 2.2 nke MyTouch 3g
T-Mobile kwadoro na ọnụ ụzọ MyTouch 3G ga-enwe mmelite na gam akporo 2.2
Anya Anya, chịkwaa gam akporo gị site na ịmegharị ngosi n'ihu igwefoto
EyeSight na-emepụta teknụzụ nke anyị nwere ike ijikwa ọnụahịa gam akporo anyị site na iji mmegharị ahụ n'ihu igwefoto.
Ọhụrụ sọftụwia na-enye Android ohere ị ga-ebido na 1 abụọ
QuickBoot bụ sọftụwia na-emepe emepe nke ga - enyere gị aka ibido ngwanrọ gam akporo na 1 nkeji.
Google TV, ihe ọ bụ, otu ọ si arụ ọrụ na vidiyo vidiyo
Otu n'ime ihe ndị kachasị atụ anya na nke kpatara ọgba aghara na Google I / O ikpeazụ bụ ngosi nke Google TV. N'ebe a, anyị na-ekwu ihe ọ bụ na otu o si arụ ọrụ.
Adobe Reader maka gam akporo ugbu a
Adobe Reader, ngwa a ma ama nke na-enye anyị ohere ịgụ faịlụ pdf niile, dị ugbu a na Ahịa gam akporo
Wikitude Drive, eziokwu dịwanye elu na-abịa GPS
Wikitude Drive bụ ngwa na-eweta eziokwu dịwanye elu na sistemụ igodo.
Gameloft na-ebupụta egwuregwu 10 maka gam akporo
Gameloft ka kwupụtara mwepụta nke egwuregwu 10 maka ikpo okwu gam akporo
Nzukọ Android, taa Israel na Luis de Bubiloop na and.roid.es
Taa, anyị ga-ekwu okwu na Israel na Jose Luis maka Bubiloop na and.roid.es
Task Tray, jikwaa ngwa dị na ndabere
Na Task Tray anyị nwere ike ijikwa ma mechie ngwa anyị nwere na ndabere dị mfe na mfe
Njikwa Wiimote, jiri Wii remote na-egwu na gam akporo gị
Wiimote njikwa na, dị ka ị pụrụ iche n'echiche site na aha, bụ ike nke na-eji Wii ime akara ịchịkwa ụfọdụ egwuregwu na anyị gam akporo.
Google Goggles na-atụgharịkwa ihe ọ na-enyocha maka anyị
Iji Google Goggles anyị nwere ike ịtụgharị asụsụ nkebi ahịrịokwu ma ọ bụ mkpụrụ okwu ndị ebipụtara.
Nzukọ Android. Taa Juan Carlos Viota si Inizziativa
Taa, anyị nwere Juan Carlos Viota site na ndị otu Inizziativa.
Etu esi wụnye Rom Cyanogen na gam akporo 2.1 na Htc G1 na anwansi Htc
Cyanogen eweputala rom ya na Android 2.1 maka Htc G1 na Htc Magic
GvSig mini, onye na-ekiri ihe na-emeghe oghere na-abịa na gam akporo
gvSIG Mini bụ onye na-ekiri n'efu maka maapụ nnweta n'efu dabere na taịl (OpenStreetMap, YahooMaps, Microsoft Bing, ...)
Skyfire 2.0 dị ugbu a maka gam akporo
Skyfire 2.0 maka gam akporo dị ugbu a
Nzukọ Android, taa Raúl Romero utu aha BgTA
Taa na nnọkọ gam akporo anyị na-ewetara gị Raúl Romero, nke a kacha mara amara n'etiti anyị maka BgTA.
Htc Ọchịchọ na omimi
Anyị na-ekwu banyere mmetụta mgbe anyị nwara Htc Ọchịchọ maka ụbọchị ole na ole.
Compaq Airlife 100 HP nke netwọkụ gam akporo dị ugbu a na Movistar
Akwụkwọ ntanetị gam akporo HP, nke Compaq Airlife 100, yana Movistar dị ugbu a
Zeemote weputara SDK ya maka Android
Zeemote ka malitere SDK maka ngwanrọ gam akporo nke ndị mmepe nwere ike ịme ma mepụta ngwa ha ma ọ bụ egwuregwu dakọtara na iwu a.
Mepụta nke gị keyboard maka gam akporo gị
Anyị nwere ike ịmepụta keyboard nke anyị maka gam akporo anyị n'ụzọ dị mfe
Nzukọ Android, taa na Yeradis Barbosa
Mkparịta ụka nke mbụ anyị duziri onye nrụpụta Yeradis Barbosa onye anyị ga-ekwu maka gam akporo
Xpectroid 1.0, iulateomi a ụdịdị dị iche iche na gị gam akporo
Xpectroid 1.0 na mounts a ụdịdị dị iche iche emulator na ọnụ na-abịa na ụfọdụ ugbu a egwuregwu
Na 2011 Ford Fiesta ga-adaba na gam akporo
Ford na-ekwuwapụta na ụdị Ford Fiesta nke 2011 ga-adaba na ụfọdụ ngwa na ngwanrọ gam akporo
Ahịa ekwentị mkpanaaka na chaatị
Eserese mara mma nke anyị nwere ike ịhụ etu esi kesaa sistemụ mkpanaka dị iche iche n'ụwa na pasent pasent ahịa dị na nke ọ bụla.
Huawei C8600 na gam akporo 2.1 gosipụtara na China
E gosipụtara Huawei C8600 taa na China na peculiarity nke na-abịa na gam akporo 2.1
SMS Ndabere, chekwaa sms gị na akaụntụ Gmail gị
Site na SMS Backup anyị nwere ike ịme ndabere ndabere nke sms anyị na akaụntụ gmail
Nzọụkwụ iji bulite ngwa na Ahịa, Apple VS Android
Ihe osise nke usoro dị mkpa iji bulite ngwa na ahịa ngwa ngwa abụọ ahụ, Ahịa gam akporo na Storelọ Ahịa
CallTrack, mekọrịta ndekọ oku na Kalịnda Google
CallTrack bụ ngwa na-enye anyị ohere igosi na Kalịnda Google ihe ndekọ niile nke oku akpọrọ, azaghị ...
Xda-mmepe weputara ngwa gam akporo ha
Web xda-mmepe emepeela ngwa ya maka gam akporo ọnụ
Onye ntụgharị asụsụ anụmanụ, Google juru anyị anya ọzọ
Google jisiri ike ịtụgharị asụsụ ụmụ anụmanụ maka ngwa maka gam akporo
Sony Ericsson Xperia X10 na Vodafone Spain, ọnụahịa
Anyị nwere ọnụahịa nke Sony Ericsson Xperia X10 ga-enwe na Vodafone na Spain
J2Android, na-agba ọsọ ".jar" faịlụ na gam akporo
Mylọ ọrụ Myriad emeela ngwa a na-akpọ J2Android nke na-agbanwe faịlụ ".jar" na faịlụ ".apk".
Otu esi enweta mgbọrọgwụ na Htc Tattoo
Ntuziaka iji nweta mgbatị Htc Tattoo na otu pịa.
Gam akporo-mmekọrịta, mekọrịta Microsoft Outlook na gam akporo
Na gam akporo-mmekọrịta anyị nwere ike ịmekọrịta Microsoft Outlook na gam akporo n'enweghị nsogbu
Koodu QR na-ekwu maka ahịa ọhụrụ
Koodu Qr na-aghọwanye ewu ewu ma na-eji ya n'ọtụtụ ọnọdụ.
Akwụkwọ ahụaja Rotator, gbanwee gị gam akporo desktọọpụ na-akpaghị aka
Akwụkwọ ahụaja Rotator gbanwere desktọọpụ ndabere nke gam akporo ọnụ dị ka configurable parameters na mbio ọ bụla 30 sekọnd ọ bụla izu.
Zumodrive, nchekwa dị n'ịntanetị maka gam akporo
Zumodrive na-enye anyị ohere nnabata na ntanetị na ntanetị 1 Gb ịgbasawanye na 2Gb na ụfọdụ atụmatụ pụrụ iche
Zgzbus, usoro iheomume ụgbọ ala Zaragoza na gam akporo
ZgzBus bụ ngwa na-enye gị ohere ịlele mgbe ụgbọ ala sitere na Tuzsa (Transportes Urbanos de Zaragoza) rutere n'otu nkwụsị.
Fildo, budata MP3s kachasị amasị gị na gam akporo gị
Na Fildo anyị nwere ike ibudata MP3 ozugbo na kaadi micro SD anyị
T-Mobile Htc G1 na-enweta mmelite
T-Mobile Htc G1 ọnụ na-anata a software update.
Fotmob na Scoreboard na News, bọl niile na gam akporo gị
Fotmob yana Scoreboard na News ga-enye anyị ihe niile anyị chọrọ iji soro ihe niile metụtara football site na gam akporo anyị
Opera Mini 5 maka gam akporo dị ugbu a na gam akporo Market
Opera Mini 5 maka gam akporo dị ugbu a na Market gam akporo maka nbudata
Aldiko, onye na-agụ akwụkwọ maka gam akporo ọnụ
Aldiko maka gam akporo bu onye na-agu akwukwo ma obu onye na-agu akwukwo nke di ugbua na Ahia gam akporo
Gam akporo NDK r3 dị ugbu a
A tọhapụrụ gam akporo NDK r3 maka ndị mmepe nwere mmelite na ịnweta OpenGL ES 2.0
Ntụziaka akwụkwọ, 2.500 nri Ezi ntụziaka na gị gam akporo
Ntụziaka akwụkwọ bụ ngwa nwere ihe karịrị 2.500 isi nri esi nri na njedebe gam akporo anyị
Gee RAC1 na android gị
RAC1 maka gam akporo bụ ngwa na-enye anyị ohere ige ntị na ọdụ a na njedebe gam akporo anyị
Na-agba ọsọ Thunder 2, 3D ịgba ọsọ ụgbọ ala maka gam akporo gị
Agingda Eluigwe 2 bụ egwuregwu egwuregwu 3D na-agba ọsọ na ọ kwesịrị ịdọrọ Market gam akporo na ụbọchị ole na ole ma ọ bụ ma eleghị anya ọbụna taa.
Xbox 360 Live maka gam akporo
Xbox 360 Live maka gam akporo bụ ngwa na-enye anyị ohere ịnweta akaụntụ anyị ma zipụ ma nata ozi, egwuregwu jikọtara na profaịlụ ma lelee kaadị egwuregwu.
Recordoid, gbanwee gị gam akporo n'ime a edekọ
Recordoid bụ ngwa dị na gam akporo Market nke na-eme ka ekwentị gam akporo anyị ghọọ ihe ndekọ
Nexus Otu na - eme ka ihe nhazi ya gbasaa na 9Ghz
9 Ghz bụ ọsọ ọsọ nke Snapdragon na-agba ọsọ na Nexus One
Achọrọ Tinye ntinye akwụkwọ ngwa gị na gam akporo gị
Aptoide bụ ngwa maka android ebe ị nwere ike itinye ntinye akwụkwọ ngwa dịka na Linux
Recognizr, eziokwu gbara ume maka nnabata ndị mmadụ na gam akporo
TAT na-ewetara anyị ngwa ngwa ọhụụ ọhụrụ maka mmata nke ndị mmadụ
Htc Ọchịchọ, na-anwale ya na MWC 2010
The Htc Desire nwekwara gabiga n'aka anyị na Mobile World Congress
Htc Legend na Htc Desire bụ ndị ọrụ ugbu a
Taa, Htc egosiputa ụdị 2 gam akporo gam akporo, Htc Legend na Htc Desire
Adobe Air biara na gam akporo
Adobe Air na gam akporo ga-ekwe omume ngwa ngwa. Adobe ekwuputala na ọ na-arụ ọrụ na iweta teknụzụ a na ngwaọrụ mkpanaka malite na gam akporo, nkọwa zuru oke.
Xperia X10 Mini na Xperia X10 Mini Pro bụ ndị ọrụ ugbu a
Sony Ericsson, otu ụbọchị tupu mmalite nke Mobile World Congress na Barcelona, ​​egosipụtala ọtụtụ ekwentị na sistemụ gam akporo dị ka Xperia X10 Mini na Xperia X10 Mini Pro
Rovio, robot ọzọ nke Android na-achịkwa
Ngwa nke na-enye anyị ohere ijikwa rọbọt, aha ya bụ Rovio.
Audiodị ọdịyo ọhụụ na-abata na sistemụ gam akporo
E kwupụtara ọkwa teknụzụ ọhụụ ọhụụ abụọ, MPEG-4 HE-AAC v2 na MPEG Surround dị maka ikpo okwu gam akporo.
Sistemu gam akporo ga - ahụ ọsọ ọsọ ya ugboro atọ
Otu ụlọ ọrụ nke bụ akụkụ nke Open Handset Alliance akpọ Myriad Group, yiri ka enweela ike melite igwe arụmọrụ nke na-eji gam akporo akpọ Dalvik
Swype, enwekwu dee ọsọ na gam akporo
Swype bụ ngwa nke dochiri kiiboodu mebere nke ngwaọrụ anyị na nke ga-azọpụta anyị oge mgbe anyị na-eji ya
Ngwaahịa na-abịa gam akporo
A usoro nke ọmarịcha ụmụ bebi gam akporo ga-ekpuchi ahịa na njedebe nke ọnwa. Kedu nke ka amasị gị?
Gen.Y DualBoot na-enye boot abụọ na ngwaọrụ Windows gị
Gen.Y DualBoot bụ ngwa nke anyị nwere ike ịhọrọ na sistemụ iji bido ọnụ ma ọ bụrụ na iji Windows Mobile ma ọ bụ gam akporo
Nexus One, mmetụta
Abọchị ole na ole site na iji Nexus One m na-eweta nkwubi okwu m
Tụnyere nke ọnụahịa nke ngwa gam akporo site na mba
Tụnyere nke price nke gam akporo Market ngwa site mba
Shop4apps, ụlọ ahịa ngwa Motorola dị ugbu a
Motorola ekwuputala ụlọ ahịa Shop4apps maka ngwa gam akporo.
Discovery Channel gị gam akporo
Discvery Channel amalitela ngwa maka ngwanrọ gam akporo iji hụ akụkụ nke mmemme ya
Ngwaọrụ CNN Chile
Ọ bụ wijetị akụkọ sitere na CNN Chile, nke anyị nwere ike itinye na desktọpụ anyị. Site na wijetị nke CNN nke Chile anyị nwere ike ịnweta ngalaba akụkọ 7
Ntuziaka TV m, ihe omume telivishọn niile na gam akporo gị
Site na Ntuziaka M Tv anyị ga-enwe mmemme telivishọn niile na mkpịsị aka anyị
Android 2.0.1 nwere nsogbu nchekwa
A na - ahụ nsogbu nchekwa na ụdị gam akporo 2.0.1 nke nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Motorola Droid terminals arụnyere na United States
Ford Sync App, jikọọ gam akporo na Ford
Ford Sync App bụ otu Apis nke ga - enyere ndị mmepe aka ịmepụta ngwa nwere ike iji ụgbọ ala na - ekwukọrịta ma zipụ ma wepụ ya site na ya site na njikọ Bluetooth.
DoubleTwist, mekọrịta iTunes, onyonyo na vidiyo na gam akporo
DoubleTwist bụ ngwa desktọọpụ nke na-enye anyị ohere ịnwe ndepụta anyị na Itunes, onyonyo ma ọ bụ vidiyo na-arụkọ ọrụ na gam akporo anyị.
Nexus Otu, nkọwapụta nkọwapụta zuru ezu
Site na engadget anyị na-enweta nkọwapụta teknụzụ niile nke Nexus One.
Bliquo, ngwa nyocha ihe eji eme n’obodo gị na gam akporo
Bliquo na-achikota ihe omuma banyere oge ezumike ndi mepere emepe site na ndi na enye ihe dika ijide ya, wepu ya ma obu 11870 ka ichoghi ihe obula.
Mmekọrịta na-efu, ngakọrịta mmekọrịta n'etiti gam akporo na PC
Na-efu mmekọrịta anyị nwere ike na kọntaktị n'etiti anyị gam akporo na pc mekọrịta site wifi. Anyị nwekwara gburugburu dị mfe ma doo anya iji nwee ike ịnyefe egwu, faịlụ, onyonyo, vidiyo site na USB n'etiti ngwaọrụ gam akporo na pc.
GREYSTRIPE, ADMOB NỌMAT ON NA ANDROID
Greystripe bụ Admob ọhụrụ asọmpi maka gam akporo ọnụ. Companylọ ọrụ a nke na-enyerịrị mgbasa ozi na ngwa na egwuregwu maka iPhone ma ọ bụ ikpo okwu Java emeela SDK ya maka ndị mmepe iji rụọ ọrụ na sistemụ gam akporo.
IHE NA-EME IWU NET ALLỌ NT THAT NA-EKWU ANY US
Youchọrọ ịma ihe ụgwọ ọnwa gị dabere na oke? Kedu ihe ga-abụ ụgwọ ọrụ gị ma ọ bụrụ na ụgwọ ọnwa gị na-eru 3.000 euro karịa? Ngwa dị mfe nke na-enye gị ohere ịmata ihe ụgwọ ọnwa gị bụ mgbe ịkwụchara ụtụ isi na Spain. Emelitere na 2009
VMWARE NA MOBILE, ANDROID NA WINDOWS MOBILE N’oge ahụ
Companylọ ọrụ VMware, ọkachamara na njikwa ọrụ nke sistemụ arụmọrụ, na-arụ ọrụ na mpaghara a mana ebumnuche maka ngwaọrụ mkpanaka.
ULTIMATEFAVES, ANDROID DESKTOP NA 3D CAROUSEL
Na UltimteFaves anyị ga-enwe ohere itinye 3D carousel mode na desktọọpụ anyị abụọ ngwa, kọntaktị, nhọrọ na ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ nke gam akporo anyị.
MOLOROLA MILESTONE NA-ECHICHE N’OBI
The Motorola Milesotne, naanị otu ọnụahịa ya na gam akporo 2.0 eruola aka anyị ma anyị emeela nyocha nke ọma.
Mara Mma WIDGET, NEW Animated WIDGETS
Site na ụdị ọhụrụ nke wijetị mara mma anyị nwere wijetị pụrụ iche maka desktọọpụ anyị
BLUETOOTH FILE TRANSFER, B AD Ọ BVR OF ỌR OF NKE BLUETOOTH ANDROID Gị
Bluetooth File Trasnfer na-enye ohere izipu faịlụ site na Bluetooth, yana nnata. Ngwa a na-ekwu maka ya dị na Ahịa gam akporo.
ANDROID GPS NAVIGATION usoro maka ụgbọala
Companylọ ọrụ ahụ ArcheMind gosipụtara na ngosipụta nke Teknụzụ 2009 nke dị na Yokohama ihe ngosi nke onye na-eduzi GPS jikọtara n'ime dashboard ụgbọala ahụ dabere na sistemụ gam akporo.
WEBSDK, Mepụta APPS NA ANDROID NA SYMBIAN
Sony Ericsson amalitela WEBSDK, ihe eji eme ka ị nwee ike ịzụlite ngwa maka gam akporo na Symbian.
ADMOB NKWUKWU SEPTEMBA
Anyị enweworị ọnụọgụ ọnwa nke Admob mere maka ọnwa Septemba. M na-ahapụrụ gị ihe kacha mkpa
HTC TATOO na azụ
Ọhụrụ gam akporo ọnụ site Htc bụ Htc Tattoo, ọnụ na enwere ike ịhazi ọbụna mba ọzọ.
MOBILEFLEET, ANDROID MONITORS ELỌ LELỌ ELỌ
A gam akporo biara n’uwa ahia ndi Spen ekele Mobilefleet. Na ngwa etinyere na gam akporo ị nwere ike inwe ...
ADOBE PHOTOSHOP IHE ANDROID
Photoshop bụ eze nke foto retouching ngwa na anyị nwere ya dị maka gam akporo ọnụ.
IGO FRIEND BROWSER SITE NA ANDROID
Igo Amigo igodo software biara n’elu ikpo okwu nke Android. Nke a na-ewu ewu nchọgharị mara maka ya mma ndịna.
ANDROID 2.0, OZI NA EGO
Ozugbo anyị nwere gam akporo 2.0 SDK dị, anyị nwere ike ịmata atụmatụ niile nke sistemụ arụmọrụ ga-ewetara anyị.
MYBACKUP, Uzo esi eme ka ndabere na ANDROID gị
Na MyBackup anyị nwere ike mfe na ngwa ngwa mee nkwado ndabere akwụkwọ na anyị gam akporo ngwaọrụ
ASTRO FILE KWES RR R RENEWS
Ngwa Astro File Manager bụ ngwa dị mkpa na ngwụcha ngwanrọ ọ bụla na ọbụlagodi mgbe emelitere
Gbanwee CAS, COMlọ ọrụ ezigbo ụlọ na ANDROID gị
Trovit ụlọ bụ ngwa na-enye anyị ohere ịmara n'oge ahụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ụlọ maka mgbazinye ma ọ bụ maka ọrịre gburugburu anyị.
APPMANAGER, Nchịkọta ọnụ gbasara ngwa gị
AppManager bụ otu n'ime ngwa ndị ahụ dị mkpa etinyere na gam akporo anyị.
SYGIC, GPS NAVIGATOR IHE ANDROID
Ngwanrọ GPS igodo ọhụrụ na-abịa na ụwa gam akporo, ọ bụ Sygic.
MOROROLA ekwentị Portal, ịchịkwa ALL ANDROid gị WIFI
Motorola emeela ngwa ngwa ngwa ngwa, Moto Ekwentị Portal. Na ya anyị nwere ike ịnwe njikwa zuru oke na njedebe gam akporo anyị na kọmputa, ndabere nke kalenda, faịlụ, zipụ sms, njikwa ihe oyiyi.
N’elu elu, gbanye ANDROid gị ka ọ bụrụ ụgbụ
Na Ikuku bụ ngwa nke na-enye anyị ohere ịnweta kaadị gam akporo anyị dị ka ngalaba netwọkụ ma jikọọ na ya site na WiFi
NDPSMỌD AP APPS, Hazie ndokwa na ANDROID gị
Ka oge na-aga, ọnụ ọgụgụ nke ngwa ndị anyị rụnyere na ọnụahịa gam akporo anyị na-etolite ma ọ bụ ntakịrị ihe na-agwụ ike ịchọ ha. Hazie ngwa na-enyere anyị aka ịhazi ngwa niile awụnyere.
MGBE, Ahịa ANDROID ahịa
SlideMe bụ Ahịa gam akporo mana ihe ọzọ na nke gọọmentị. Anyị nwere ike ịchọta ma ngwa akwụ ụgwọ n'efu na egwuregwu.
Melite maka HTC HERO
Mmelite maka Htc Hero dị ugbu a. Enwere ike ibudata ya na peeji nke Htc
FACEBOOK IHE ANDROID NA NTACKKỌ
Ngwa Facebook maka njedebe gam akporo bụ otu n'ime atụmanya kachasị anya, ka anyị hụ ka o si arụ ọrụ nke ọma.
Iwunye AKW NEWKWỌ ỌH ONR ON NA ANDROID
Echere m na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile anụwo banyere ọnọdụ mgbake, ịpị ALT + s, na-ehichapụ ya, wdg. Anyị ga-edozi ụfọdụ ihe ma wụnye ndị ọzọ
FACEBOOK APP NA ANDROID KWES ONR ON NA Ahịa ANDROID
Kemgbe ụnyaahụ, ngwa Facebook maka njedebe gam akporo dị na Ahịa gam akporo.
NEBUDROID NA-ECHICHE GI NA ANDROID
Na Nebudroid ị ga-enwe ike atụgharị gị gam akporo ọnụ n'ime onye ọzọ iwu nke Nes console. Nwere ike iji accelerometer na ihuenyo mmetụ iji kpọọ
SONY ERICSSON XPERIA X5 (NADINE) NA ANDROID
A rumo banyere ihe gam akporo ọnụ a na-akpọ Sony Ericsson Xperia X5 na koodu aha Nadine na-agba site na ọtụtụ weebụsaịtị na mpaghara.
ANDROID NA LINUX, NKWUO
Taa, anyị ga - amalite obere nkuzi na Linux na Android. Nke a abughi ebumnuche ma ọ bụ oke ...
Onye isi, ANDROID nwekwara maka mwakpo
Kpuru ìsì bụ ngwa pụrụ iche mere iji nwee ike iji gam akporo ọnụ site na ndị ìsì
POWERPOINT NA ANDROID nwere akwụkwọ iji gaa 2.0
Versiondị 2.0 nke Documents to Go application dị ugbu a na Ahịa gam akporo nke anyị nwere ike iji Okwu, Excel, PowerPoint na PDF dọkụmentị rụọ ọrụ.
Etu ị ga-esi nweta mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ NA HTC HERO
Akwụkwọ ntuziaka iji nweta mgbọrọgwụ na Htc Hero.
Mgbọrọgwụ ACCESS NA HTC SI KWUKWU NA SPL NKWUKWU
Manul otu esi enweta ohere mgbọrọgwụ na Htc Ime Anwansi na otu esi wụnye Haykuro SPL ọhụrụ maka mgbanwe rom ọzọ
Olu okwu GOOGLE NA ANDROID BU OWU
O kwere omume ibudata ngwa Google Voice maka gam akporo site na Ahịa gam akporo, ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ naanị n'ahịa ndị America
Copaili bi na ANDROID, Mbipụta
Copilot Live maka gam akporo dị ugbu a na Ahịa gam akporo ma ọ bụ onye nchọta GPS zuru ezu maka sistemụ arụmọrụ a
DONUT, ECLAIR NA FLAN ỌZỌ ANDROID Nyocha
Gam akporo ga-enwe mmelite atọ akpọrọ Donut, Eclair na Flan. A ga-akwalite njikọta nke gam akporo na netwọkụ mmekọrịta dịka Facebook na Twitter
ANDROID NA-EME MA Ọ BES NA-ANA-EME
Otu n'ime ihe dị iche iche dị mkpa na mkpanaka mkpanaka bụ ụdị ihuenyo, ma ọ bụ ikike ma ọ bụ na-eguzogide ọgwụ.
AYBỌR FOR NKE ANDROID, Obodo niile na aka gị
Layar, ngwa nke na-enye anyị ohere ịnweta ihe niile kachasị mkpa na obodo dị n'ọbụ aka anyị.
WALLPAPERS IHE ANDROID gị
Akwụkwọ ahụaja idowe na anyị android ọnụ
OZI, Kpọtụrụ onye na-elekọta gị
aContact bụ ezigbo njikwa nke kọntaktị gị, nwee ọtụtụ ohere
QR CODES NA BARCODE nyocha
Barcode nyocha, ngwa iji gụọ ma mepụta Koodu QR
APPMANAGER, NA-AKWINGKW APKW FROMKWỌ ND FROM SITE NA Kaadị ahụ
Na appManager anyị nwere ike iwunye ngwa site na kaadị ebe nchekwa na iwepụ, na mgbakwunye na inwe ike ịme nkwado ndabere akwụkwọ
MMA EGO NA ANDROID
Bugharịa oghere ekwentị na SD
Etu ị ga-esi nweta mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ na HTC SIX
Emelite ntuziaka emelitere na https://www.androidsis.com/acceso-root-en-htc-magic-e-instalacion-del-spl/ Iji malite, gwa gị na nke a bụ naanị nsụgharị n'efu nke akwụkwọ ntuziaka ezigara ebe a. Niile…
Ahome, na-ahazi gam akporo anyị
Ahome bụ ngwa nke na-enye anyị ohere ịgbanwe ọdịdị nke ngebichi nke njedebe gam akporo anyị.
SYNCHRONIZE GWKTA NA ANY AND ANDROID
Etu esi emekọrịta Outlook na Kalịnda Google
Etu esi enweta rool na T-Mobile G1
akwụkwọ ntuziaka ka esi mee ka mgbọrọgwụ banye na G1 na gam akporo
Ahịa ANDROID UGBU A NA-AKA Nweta SPAIN
Mgbe mbido na nso nso a na Spain nke Htc Deam nke Movistar na Htc Magic site na Vodafone, Ahịa gam akporo dị ugbu a iji bipụta ngwa n'efu